Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zikaJuan Carlos Onetti › Juni 2022
Okungashi umlilo UJuan Carlos Onettieduze kwe UMario Benedetti y Eduardo cabas, bakha i-triumvirate yemibhalo esuka e-Uruguay yabo ejwayelekile kuye e-Olympus yezinhlamvu ngeSpanishi. Ngoba phakathi kwalaba abathathu bahlanganisa yonke into, noma yiluphi uhlobo lwephrozi, ivesi noma esiteji.
Yize ngamunye enikeza lo mbhalo othile kanye nokungahlaliseki okulandisayo (ngale kwamalebula okujika aphendukela kokungaqondakali okungaphezulu kwesikhala noma isikhathi sokuzama ukuhlanganisa noma ukulinganisa), kuyiqiniso futhi ukuthi izimo okwabelwana ngazo zekhulu lamashumi amabili zazibekwa lapha nalaphaya ekwehleni nakwezokwehla kwezombangazwe nakwezomnotho kwazo zonke izinhlobo emhlabeni okwakhomba ekusetshenzisweni kwembulunga yonke nasekuphindaphindweni okuvamile kwenkinga ngayinye, kwesinye isikhathi kwakusebenza ngokuvumelana kwemvelo.
Isimangaliso sase-Uruguay esenze izwe lalaba bafundi abathathu lalimisa kahle kakhulu kwaze kwaba maphakathi nekhulu lama-29, laqala ukuhlupheka ngenkinga yangama-XNUMX futhi lagcina liwile ngezimpi zomhlaba ezimbili ezalandela.
Umbuso wobushiqela wamasosha ngeminyaka yama-70s watholwa kulaba babhali abathathu amazwi amathathu abucayi, ahlolwa kaningi futhi adingiswa njengokhetho kuphela. Wabelane ngamanothi abalulekile abonisa ezincwadini zakhe okuhlukile kwezipho zakhe ezinhle zokudala ekugxekeni nasekususeni.
Kepha u-Onetti ukhomba kokuhlukile okweqile. Ngoba wayekhulu kakhulu ngisho nangaphambi kokuqothulwa kweBoldaberry. Kusuka ngo-1939 kuya kowe-70 isikhathi lapho u-Onetti akwazi ukubhala khona imisebenzi yakhe enamandla kakhulu, ngalobo bukhazikhazi obukhona phakathi kwezinsolo ezithakazelisayo ezivela edolobheni lakhe elasungulwa, iSanta María, lapho izinhlamvu zifika zivela kwezinye izindawo zangempela, emdlalweni wezibuko bambalwa ababhali abangaphinda ngobuciko obufanayo.
Izincwadi ezintathu ezinconyiwe nguJuan Carlos Onetti
Bonke abafundi be-Onetti bacabanga ubukhulu bobuciko obubuciko, balesosibhakabhaka esikhishwe ngumxoxi wezindaba. Yize ngingathandi ukuhlanganisa, ngikholwa ukuthi angiphutha ekuhloseni lelo zinga elingasafinyelelwanga emisebenzini eyedlule noma yakamuva.
UJuan María Brausen noStein babhekene nomsebenzi wokuvala iskripthi sefilimu. Indaba ethunyelwe izokwenzeka eSanta María. Futhi lapho uJuan María uthola abalingiswa okufanele baphile ukuze ekugcineni balandele ifindo lomlando wabo.
Kancane kancane uBrausen ufaka le ndaba empilweni yakhe ngenkathi eveza impilo yakhe ekulandiseni. Ukuphindaphindeka kwezinto kombhali kwenza isimo esiyinkimbinkimbi futhi esiphelele.
Isaba sikaSanta María sokufihla icala, ukudabuka kwenhliziyo nokwesaba phakathi kwemigwaqo eyakhiwe. Izinhlamvu ezibonakala zinezihluthulelo ezivula iminyango ngokoqobo kweBrausen neBrausen eyandisa amaphupho ayo kanye nokucatshangwa okucatshangwayo kuskripthi ukuze ihlale ezimweni nasezimpilweni, njengalelo phupho elidala lokubona ukuthi abanye baphile futhi bajabulele injabulo yabanye, ukupaka izindaba zakho empeleni kube yindaba eqanjiwe.
Uma ukhuluma nothile ngo-Onetti, futhi ngaphandle kwalokhu okungenhla mayelana nobuciko obungaphezulu kokungenzeka, abanye abafundi abaningi bacaphuna le enye inoveli kuqala. Kuzoba ngesinye sezimo zakhe ezilawuleka kakhulu emhlabeni wethu ompunga.
Ngandlela thile, kubonakala kunesifiso sokuya endaweni eqanjiwe njengeSanta María, engakhanya phakathi kokuzithokozisa noma injabulo futhi ekugcineni uthole usizi olufanayo.
Kepha ngukuthi, njengoba ababhali abaningi bephawula ngezikhathi ezithile, ukudabuka kungumthombo omkhulu kakhulu wokhuthazo. Ukubola ne-nostalgia kukugcina ekuphithizeleni kokudala inqobo nje uma kungakuhlisi phansi. Futhi u-Onetti wayeyingcweti kulowo mhlangano wenganekwane eyayilingisa imizwa edabukisayo emhlabeni wethu.
Izinhlamvu zihanjiswe yi-inertia engakhiqizi ezweni eligugile. Imikhumbi yemikhumbi enama-echoes okuchuma ahlaba onembeza bacwila phansi.
Lapho u-Onetti esetholakele, kufanelekile ukuma kule noveli emfushane enokuthile kwesitatimende salo lonke iqiniso, ubufakazi obuqand 'ikhanda bombhali. U-Onetti uqobo uchaze lo msebenzi njengowuthandayo kakhulu, noma kwesinye isikhathi. Kufanele kube nesizathu.
Iqiniso ukuthi umlingiswa odabeni kungenzeka kube u-Onetti uqobo, ofihliwe njengoba inkanyezi yezemidlalo yakudala yafika edolobheni elisentabeni elidume ngezimpawu zalo zokwelapha isifo sofuba.
Isimo sakhe esithile, ukuba khona kwakhe nokuziphatha kwakhe okungajwayelekile kusheshe kwaheha umuntu ophethe okuthunyelwe kwedolobha. Ukwenza izinto zibe zimbi kakhulu, izincwadi eziyinqaba zifika kumlingiswa ophambili, njengoba, njengoba bedlula ezandleni zikaposi othile wedolobha, bebhala emcabangweni wabo indaba ejulile yomlingiswa ogcina ephephela kuleso sigodi esithulile.
Ubufushane bale noveli, umoya wayo omnene, kodwa, nomqondo weposi oguqula ukuba khona kwakho konke okuzungezile kwakha isithombe esibucayi mayelana nokuthatha umhlalaphansi kwe-protagonist kanye nokuma kwempilo ezansi kwezintaba.
Tags UJuan Carlos Onetti, Amanoveli akhona
Amazwana ama-4 kokuthi "Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zikaJuan Carlos Onetti"
Pingback: Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zikaJuan Tallón › Ngo-Ephreli 2022
Pingback: Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zika-Mario Levrero › Ngo-Ephreli 2022
Pingback: Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zikaFernando Butazzoni › Mashi 2022
Pingback: Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili nguHoracio Quiroga ›Mashi 2021